Iwe Unoshandisa Mazuva makumi matatu nemasere E-mail Kutumira | Martech Zone
Wepakati mutengesi anotora anopfuura maawa zviuru zviviri pagore pane kutaurirana kwebhizinesi, kunyanya pamabasa akasarudzika (2,000%) uye kuverenga / kupindura maemail (39%). Kunyange zvingaite senge pasocial media iri kuve nzira inozivikanwa kwazvo yekutaurirana, sezvo makumi manomwe kubva muzana emakambani ave kushandisa nhepfenyuro mune imwe nzira, email ichiri sarudzo yepamusoro pakati pemabhizimusi kutenderera pasirese. Sekureva kweMcKinsey Global Institute Report, 28 maemail anonyorwa zuva rega rega. Pakati pevanhu vekuAmerican vane makore gumi nemaviri zvichikwira, 72% vanoshandisa email yavo nguva dzose, 87% yacho iri kuongorora mabhokisi avo ekutanga mangwanani.
Email inorova dzimwe dzese nzira dzekutengesa nekaviri ROI, $ 40.56 pamadhora ese 1 anoshandiswa pakutengesa email. Sezvo kutaurirana kweemail kunoratidza kuti hakuna zviratidzo zvekudzikira, mabhizimusi akangwara ari kugadzirisa chikuva ichi. Cirrus Insight inopa rairo kune chero munhu arikutsvaga kuvhara iyo gaka pakati peGmail neSalesforce mune yavo yemahara ebook Inotevera-Chikamu Software Kubatanidza.
Tags: eInboxinfographicYeMahara neThebhu KushambadziraKugonesa Kugonesa